Global Voices teny Malagasy » Misaona Ny Fahafatesan’Ilay Mpanakanto Ogandey Mowzey Radio Teo Amin’ny Faha 33 Taonany I Afrika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Febroary 2018 4:31 GMT 1	 · Mpanoratra James Propa Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Mainty, Oganda, Mediam-bahoaka, Mozika, Tanora
Pikantsarin'i Mowzey Radio (1985-2018) nalaina tao amin'ny lahatsarin-kiran'ny Radio and Weasel 2016 “Plenty Plenty”
Maty tamin'ny 1 febroary 2018 i Mowzey Radio, mpihira Ogandey manana ny lazany manerana ny kontinanta Afrikana, rehefa afaka sivy andro taorian'ny ratra nahazo ny lohany nandritra ny fifanadonana nitranga tao amin'ny toeram-pisotroana iray..
Moses Ssekibogo Nakintijje  no tena anaran'ity mpanakanto 33 taona ity, izay indraindray antsoina hoe Moses Radio, niala tao amin'ny trano fonenany any ambanivohitr'i Kampala izy tsy niaraka tamin'ny mpiambina azy ny 22 Janoary, fa niaraka tamin'ny iray tamin'ireo mpamokatra ny hirany ,Washington Magic , mba hijery ny trano vaovao izay naoriny amoron'ny farihy any Entebbe, Oganda. Ny harivan'io, nasain'ny namana iray nankany amin'ny toeram-pisotroana iray tao Entebbe izy ireo ary rehefa tonga tany dia niditra tamina ady i Mowzey Radio izay niafara tamin'ny fanipazan'ny mpiambina ny toeram-pisotroana azy tany amin'ny gorodona ‘carreaux’, ka nahavaky ny lohany.
Vokatr'izany dia tsy nahatsiaro tena intsony ilay mpihira. Nentina nankany amin'ny toeram-pitsaboana tao an-toerana izy tamin'ny voalohany, ary avy eo tany amin'ny hopitaly lehibe iray, izay nandidiana ny lohany. Nandritra ny andro vitsivitsy, hita fa niha-natanjaka  izy. Na izany aza, niharatsy ny fahasalamany ary maty izy tamin'ny farany.
Nahazo ny fon'ny Ogandey maro i Mowzey Radio noho ny hatsaram-peony sy ny fahaizany mamorona tononkira hatramin'ny nampalaza azy nanomboka tamin'ny taona 2007. Niara-niasa tamin'i Douglas Mayanja (fantatra koa hoe Weasel Manizo) i Mowzey Radio tamin'ny fananganana ny Goodlyfe Crew and Radio & Weasel , ary nahazo mari-pankasitrahana maro teo an-toerana sy iraisam-pirenena izy roa ireo nandritra ny taona maro .
Maro ny artsita Ogandey malaza hafa no maty taorian'ny tranga toy izany tao anatin'ny telo taona, anisan'izany ilay mpanakanto Akay Fourtyseven , ilay mpiangaly mozika Master Blaster , ilay mpamokatra mozika Danz Kumapeesa , ary Dizzy Nuts . Niteraka tahotra ho an'ireo mpanakanto ao amin'ny orinasan'ny fialamboly Ogandey ireo fahafatesana ireo.
‘Nanome ahy hatrany izy na kely aza izay nananany ‘
Nandritra ny Lamesa ho an'i Mowzey Radio, nitomany i Weasel Manizo raha nitantara ny asany niaraka tamin'ity namana mpiara-miasa taminy ity izay nindaosin'ny fahafatesana ankehitriny :
Mayanja Douglas Weasel no anarako … Ary rahalahiko i Moses Radio. Nanomboka niara-niasa tamin'ny kely indrindra izahay ary nifanome toky fa samy hanao izay ho afakay. Mino aho fa efa nahatsapa izany ianareo … Nankany amin'ny BET Awards izahay, nahazo mari-pankasitrahana maro izahay, nandeha nandia izao tontolo izao saingy nandao ahy ny rahalahiko ny farany. Handry am-piadanana anie izy. Tsy manana zavatra hafa holazaina aho. Handry am-piadanana anie izy.
Nahatsiaro ny zanany lahy ho malala-tanana tamin'ireo olon-tiany ny renin'i Mowzey Radio, Kasuubo Jane:
Tiako loatra ny zanako lahy. Nomeny ahy hatrany izy na kely aza izay nananany. Nikarakara hatrany ny anabaviny i Mowzey Radio. Na dia maro aza no nahafantatra azy ho lehilahy be korontana dia fantatro izy fa zazalahy tsotra, manetry tena ary manan-talenta…. Nandoa ny saram-pianaran'ny iray tamin'ireo anabaviny ny zanako lahy mandra-paha vita ny fianarany vao haingana. Nanana namana maro be izy. Tsy manana na inona na inona intsony aho.
Ny vahoaka maro, ​​anisan'izany ny kintan'ny mozika avy amin'ny lafivalon'ny kaontinanta sy manerana izao tontolo izao no naneho ny alahelony noho ny fahafatesany ary nanome voninahitra azy tamin'ny fandraisany anjara tamin'ny indostrian'ny mozika Afrikana.
Tsy nahatana ny ranomasony raha nahare ny vaovao ilay mpanolotra fandaharana ao amin'ny fahitalavitra Ogandey Douglas Lwanga:
Farewell Radio#RIPMowzeyRadio 😭pic.twitter.com/yT5s87H909 
Andriamanitra ô! tena nidom-pahoriana aho. LASA I RADIO. Toy ny nofy ratsy izany. Andriamanitra ô
Veloma ry rahalahiko
Nisioka ihany koa ny mpanakanto Nizeriana sy ilay niteraka fihetseham-pon'ny hira teo amin'ny sehatra iraisampirenena Wizkid ho fahatsiarovana an'i Mowzey Radio; Niara-niasa tamin'ny Radio & Weasel izy tamin'ny hira iray mitondra ny lohateny hoe “Don't Cry ” taona vitsivitsy lasa izay:
Mandria am-piadanana Radio
Nidera ny talentan'i Mowzey Radio ilay mpanakanto Nizeriana nahazo loka iraisam-pirenena Peter Okoye, avy ao amin'ny tarika PSquare teo aloha:
Miombon'alaahelo amin'ny fianakaviana Ssekibogo iray manontolo aho sy ireo tia mozika Ogandey sy ireo mpankafy. Vao reko ny fahalasan'i Mowzey Radio. Mandria am-piadanana ry rahalahy. Lehilahy manan-talenta lehibe ianao ary tsy ho adinoinay ianao. Mandria am-piadanana.
Nandray anjara ara-bola  teo ho eo amin'ny 9.000 dolara amerikana teo ny Filoha Ogandey Yoweri Museveni ho an'ny saran'ny nampidirana hopitaly an'i Mowzey Radio ary nandoa ny fandaniana lany tamin'ny fandevenana azy ihany koa. I Mowzey dia anisan'ny ekipa nihira tao anatin'ny hira all star mitondra ny lohateny hoe “Tubonga Naawe” (teninjatovo Luganda izay midika hoe “Mandresy miaraka aminareo izahay”) izay natao fanentanana tamin'ny nahavoafidy ny filoham-pirenena indray tamin'ny taona 2016.
Tao amin'ny Facebook, tsy nampino an'ilay mpiangaly mozika lasa mpikambana ao amin'ny parlemanta Robert Kyagulanyi, fantatra amin'ny anarana hoe Bobi Wine, ny fahalasan'i Mowzey Radio ary nanome fankasitrahana  ny fiainany fohy sy manan-danja ihany koa izy.
Mandria am-piadanana ry namako, ry rahalahiko.
Tena mampalahelo fa teo amin'ny fotoana nilan'ny fianakavianao, ny namanao, ny indostrian'ny mozika ary ny firenenao anao indrindra no nandaozanao anay. Sarotra ny mino izany. Tsy ampy hanehoana ny zavatra tsapako amin'izao fotoana izao ny teny. Tena mampalahelo tokoa fa namoy anao ny taranaka iray. Hankalaza hatrany ny fiainanao fohy kanefa tena manan-danja izahay. Mbola hahita anao any izahay indray andro any. Enga anie ny Tompo handray ny hatsaram-panahinao any amin'ny voninahitra mandrakizay.
‘Raha omeko fitiavana ve ianao dia hahatsiaro ahy’
Tao amin'ny Instagram, nizara ny sarin'ny iray tamin'ireo mpanjifany izay nanome ny endrik'ilay mpanankato nindaosin'ny fahafatesana taorian'ny volony ilay mpanao volo fanta-daza sady mpanety volon-dehilahy Mart :
A post shared by Martbarber uganda (@martbarber_uganda)  on Feb 2, 2018 at 11:12pm PST
Ho an'ny hiran'ny Radio & Weasel mitondra ny lohateny hoe “Remember Me” ny lahatsarin-kira farany izay navoakan'i Mowzey Radio ary miresaka momba ny fiarahana indray alina izay nirìny hitohy, kanefa manontany tena izy raha toa ka mba nahatsiaro azy toy izany ihany koa ilay olona niarahany. Noho ny fahafatesany tampoka anefa dia lasa misy dikany vaovao ilay andininy toy ilay hoe: “Raha omeko fitiavana ve ianao dia hahatsiaro ahy “:
Namoaka lohateny iray mitondra ny lohateny hoe ” Mama ” ihany koa ny Radio & Weasel vao haingana izay niderany ny reniny. Voalaza fa nandao tetikasa maromaro tsy mbola nivoaka ilay artista.
Tamin'ny 3 Febroary 2018 no nalevina tany amin'ny tanindrazan'ny reniny tao Kagga i Mowzey Radio ,.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/14/114950/
 Moses Ssekibogo Nakintijje: https://en.wikipedia.org/wiki/Mowzey_Radio
 Washington Magic: http://www.hipipo.com/home/2016/06/26/meet-ugandan-producer-washington-david-bangiti-find-photos-music-projects-videos-and-studio/
 Goodlyfe Crew and Radio & Weasel: https://en.wikipedia.org/wiki/Goodlyfe_Crew
 Akay Fourtyseven: http://www.ugandaonline.net/news/view/15797/chameleone_s_younger_brother__ak47__dead
 Master Blaster: https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1413835/master-blaster-embooko-singer-shot-dead-bar
 Danz Kumapeesa: http://kampalasun.co.ug/2017/10/07/producer-danz-kumapeesa-is-dead/
 Dizzy Nuts: https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1465159/singer-dizzy-nuts-knocked-hit-run
 February 3, 2018: https://twitter.com/DouglasLwangaUg/status/959745818734530561?ref_src=twsrc%5Etfw
 Don't Cry: https://www.youtube.com/watch?v=A4pF8xqO_E8
 February 3, 2018: https://twitter.com/wizkidayo/status/959623655465549824?ref_src=twsrc%5Etfw
 February 1, 2018: https://twitter.com/PeterPsquare/status/958975280231669761?ref_src=twsrc%5Etfw
 Nandray anjara ara-bola: https://twitter.com/KagutaMuseveni/status/958951105878220800?ref_src=twsrc%5Etfw
 nanome fankasitrahana: https://web.facebook.com/www.bobiwine.ug/photos/a.10152336542993012.1073741826.130737598011/10157087262533012/?type=3
 A post shared by Martbarber uganda (@martbarber_uganda): https://www.instagram.com/p/BeucjrJHSzT/